Itti aanaa Prezdaantii Suudaan Kibbaa dabalatee qondaaltonni biyyattii heddu COVID-19 qabamuu gabaafame
Itti aanaan Prezdaantii Suudaan Kibbaa Riik Machaar fi Haadha Warraa isaa, akkasumas eegdonnii fi qondaaltonni waajjira Itti aanaa prezdaantii heddu vaayirasii koroonaatiin qabamanii jiru. Riik Machaar Televezhiina Mootummaa Biyyattii SSBC irratti dhihaatuun, isaa fi qondaaltonni mootummaa kanneen biroo vaayirasichaan qabamuu mirkaneesse.
Riik Machaar ibsa kenneen “Ani Itti aanaan Prezdaantii Suudaan Kibbaa vaayirasii Koronaatiin qabamee jira. Haaluma walfakkaatuun qondaaltonni birootis vaayirasichaan qabamanii jiru. Haadha warraa tiyya Angelina Teny fi Ministeerri Ittisaa namoota vaayirasichaan qabaman keessa kan jiran tahuus beeksisaa” jedhe.
Hogganaan garee to’annoo COVID-19 Angelo Goup Thon Kouch, guyyaa lamaan dabran qofa Vayirasichi namoota 57 irratti argamuu ibsuun, biyyattii keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaatiin qabamuu mirkanaahee 347 gahuu beeksise.
Torbee lamaan dabran naannawa Baha Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii saffisaan dabalaa jira. Hanga guyyaa kaleessaatti Suudaan (Kaartuum) namoota 2,591 vaayirasichaan qabaman jidduu 105 du’uu beeksiste. Jibuutii keessatti namoonni 1518, akkasuma Somaaliyaa keessatti ammoo namoonni 1,455 vaayirasichaan qabamuu gabaafame.